Zimbabwe Inocherechedza Africa Day
Chivabvu 25, 2010
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzemu Africa mukucherechedza zuva reAfrica Day.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vatungamira hurongwa hwekucherechedza zuva iri muHarare. Vachitaura paharongwa uhu, VaMugabe vakurudzira vanhu kuti varemekedze zvinangwa zvevatungamiri veAfrica vekutanga.
Ukuwo MDC inotumgamirwa naVaMorgan Tsvangirai yaburitsawo gwaro ichiti inokoshesa zuva reAfrica Day. MDC yati inoremekedza South Africa senyika yaratidza nyika dzose dzemu Africa kuti ine hutongi hwejechetere.
Africa Day inocherechedza nemusi wa 25 Chivabvu gore rega rega, senzira yekuremekedza kuumbwa kwesangano renyika dzemu Africa, reOrganisation of African Union, iro rava kunzi African Union.
VaJoy Mabenge ndivo mukuru mubazi reDemocracy and Governance musangano reInstitute for a Democratic Alternative for Zimbabwe. VaMabenge vanoti Zimbabwe yanhasi inofanirwa kucherechedza Africa Day nokuti hurumende iri kutonga, ndeyemapato ose, izvo zvasiyana nehurumende yaVaMugabe yaivepo.